Tsy mankahala Windows aho, tsy mankahala Mac, tiako fotsiny ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
Tsy mankahala an'i Windows aho, tsy mankahala an'i Mac, fa ny GNU / Linux fotsiny no tiako
Windows ny fako? OS X tsy mandeha? Ny Operating Systems dia tsy "ratsy", na "devoly", fa tsy manova azy ireo ho iray amin'izy ireo ho ahy aho. GNU / Linux. Ary eny tompokolahy, mandreraka ity lohahevitra ity.
Lazaina ny marina: Tsy misy rafitra miasa, lozisialy, programa, fampiharana na izay tianao hiantsoana azy hoe tonga lafatra. Izy rehetra dia samy manana lesoka, lesoka ihany koa Windows, OS X, GNU / Linux, Unixna dia BSD izay milaza ho iray amin'ireo rafitra miasa mafy orina indrindra misy.
Izaho dia mpampiasa an'i Windows 95, 98, Arivotaona, 2000 y XP alohan'ny manomboka amin'ny GNU / Linux. Amin'izao fotoana izao amin'ny asako dia manana PC dual-boot tsy dia fahita firy aho (hiteny hoe tsia), ny fanombohana Windows 7. Lazaiko anao izany satria isaky ny manome ny hevitro aho ny amin'ny antony handinihako izany GNU / Linux tsara kokoa noho Windows, maro no mihevitra fa tamin'ny fiainako no nampiasako ilay farany voalaza.
ny Windows XP Tsy nino aho fa mety misy Rafitra Fandidiana tsara kokoa eto amin'izao tontolo izao. Naheno momba an'i Mac aho, fa araka ny mahazatra dia nisy olona nilaza fa lafo ny mahazo izany, tsy nahasarika ny saiko mihitsy izany. Ary indray andro soa dia nihaona aho Ubuntu, Nefa tantara hafa izany.
Betsaka amin'ny hevitro manokana ny Linus Torvalds y Richard Stallman, Mahafinaritra ahy ny asa vitan'izy ireo ary noho ny fisaorana azy ireo (sy ny maro hafa izay zara raha voalaza), dia mankafy ny Debian amin'ny KDE. Mahagaga fa na eo aza ny zava-tsarotra, ny Kernel izay ampiasaiko dia mahay mitantana tsara ny fitaovana sy fitaovana marobe, maodely sy marika maro karazana.
Mazava anefa izany GNU / Linux tsy lafatra toa ny nolazaiko teo aloha. Matetika ireo mpampiasa vaovao dia tsy mijanona mieritreritra fa rehefa "misy zavatra tsy mandeha" toa ny Windows na Mac, dia tsy hoe ratsy ny "Linux", fa satria ny mpanamboatra fitaovana dia liana amin'ny fanarahana ny lalan'ny vola notadiavin'ny Microsoft y Apple.
Mora dia mora ny milaza hoe: Tsy mandeha io Linux, shit .. sa mandeha izy, fa tsy toy ny tokony .. Fa misy manontany tena hoe nahoana? Ireo izay miresaka toa izany dia nieritreritra ny ezaka rehetra ataon'ny mpandahatra programa mba hahatonga ny mpamily video generic hiasa tsara amin'ny chipset? Intel o amin'ny alalan'ny? Na ny ezak'izy ireo Pulseaudio o Alsa mitantana karatra am-peo tsara?
Ara-dalàna raha misy ny olana mety haterak'izy ireo indraindray. Akory ny hatsarany raha toa ka mivoaka ny mpanamboatra fitaovana tsirairay, miaraka amin'ireo mpamily Windows sy Mac, ireo mpamily ilaina amin'ny Linux hitantanana tsara ny vokariny, sa tsy izany? Saingy indrisy tsy izany no izy amin'ny tranga rehetra. Araka izany GNU / Linux tsy lavorary ary tsy ho tanteraka.
Na izany aza, eo amin'ny fetra be dia be, dia hainy ny mamirapiratra manoloana ny sisa amin'ny Operating Systems. Miaraka amin'ny fanohanana sy fanohanana kely avy amin'ny mpanamboatra azy dia mahagaga ny fomba fiasan'ny sasany amin'ireo mpamily generika ireo tsara kokoa noho ny mpiara-miasa aminy.
Raha toa ka mila Gigas sy Gigas vao afaka mametraka Windows 7 y Windows 8, ary na dia apetraka aza dia ilaina ny mpamily amin'ny motherboard, audio, video, sns ...
Na dia mila fitadidiana RAM 2 Gb aza ianao satria tsy ampy intsony ny 1 Gb, raha mizarazara kosa ny kapila, raha afaka misedra viriosy fotsiny ianao amin'ny fieritreretana azy fotsiny, raha tsy manana kiheba, na fomba fijery tsy mizarazara ny Explorer. hatrany amin'ny toerana lavitra indrindra amin'ny Mac anao.
Raha izany rehetra izany dia mitranga amin'ireo Operating Systems roa faran'izay tsara, izay iasan'ny zava-drehetra (na dia tsy fantatrao aza ny fomba na ny fotoana)amin'ny GNU / Linux azonao atao ny manana tontolon'ny Desktop feno sy miasa, miaraka amina fitaovana maro, miaraka amin'ireo mpamily ho an'ny ankamaroan'ny fitaovana maoderina, ao anatin'ny 4GB habaka kapila.
Amin'ny RAM 1GB ihany dia azonao atao ny manana ny birao maoderina indrindra napetraka, miaraka amin'ny effets grapikety mahatalanjona, ary mbola manana fahombiazana tsara, ary raha te-hihary bebe kokoa ianao, dia eo ny safidinao: Mpitantana varavarankely, LXDE, Xfce...
Afaka amin'ny ankamaroan'ny viriosy ianao, ary ny rafitra fandidiana amin'ny ankapobeny dia azo antoka kokoa. Azonao atao ny mametraka Office Suites, mpilalao audio sy horonan-tsary, fampiharana ho an'ny fianarana, asa, fanavaozana ny fiarovana isan'andro na fanatsarana (izay antsoinay hoe Service Pack), ary ny ampahany tsara indrindra amin'izany rehetra izany dia tsy mila mandoa denaria iray isika. Ary amin'ny farany dia afaka manao zavatra mitovy amin'ny mpiara-miasa aminao, ny mpiara-monina aminao, ny namanao ianao.
200 $ na mihoatra ny vidin'ny fahazoan-dàlana Photoshop Maninona raha manome azy ireo GIMP mihatsara? Ny ankamaroan'ireo rindranasa izay ankafizinay be dia be dia novolavolain'ny olona izay tsy mitaky vola na kely ariary ho azy. Ny olona manana fiainana, vady, zanaka, reny, ray, fianakaviana amin'ny ankapobeny ary tsy andevontsika izy ireo.
Ny zavatra tsy maintsy ataontsika rehetra amin'ny console na terminal dia lainga. Eny, misy ny asa tsy maintsy atao amin'izany fomba izany, fa mihoatra noho ny zavatra rehetra satria tia manao an'izany isika eto amin'ity tontolo ity, satria na dia tsy mino an'io aza izy ireo dia mety ho lasa mora kokoa.
Ary afaka nanohy nanome antony sy antony aho Fa inona? Ireo mahalala izay lazaiko dia hanaiky ahy, ireo izay te hahalala dia hotarihin'ny fahalianany, ireo izay tsy hanohy hieritreritra fa Lehilahy adala aho ary volo mihohoka amin'ny lohaliko, taliban, tia fanina miaraka amin'ny fironana hamono tena, tsy mendrika miaraka amin'ny hetahetan'ny hacker.. ary minoa ahy, lavitra ny zava-misy izany.
Izay lazaiko foana Te-hampiasa Windows ianao? Te handoa vola ve ianao? Te hiaina miandry ve ianao raha mandeha ny antivirus na tsia? Te hampiasa vola bebe kokoa amin'ny fitaovana ve ianao? Te hijanona ho andevo ve ianao ary hanaiky izay apetraky Apple sy Microsoft? Mandrosoa ihany, tsy izaho no hiteny hoe tsia.
Tiako ny rafi-piasako ary manana mihoatra ny 20 ny antony tiako itiavako azy noho ny hafa rehetra. Tsara kokoa ho ahy izany fa tsy midika hoe tena izy. Windows amin'ny maha rafitra azy dia tsy ratsy, OS X na, nefa tsy misy manolotra ahy izay ilaiko. Tsotra toy izany, ary azoko antoka fa ho an'ireo mpampiasa hafa izay mamaky ahy dia mifamaly ilay eritreritra.
Araka ny nolazaiko tany am-piandohana: Efa mandreraka ity lohahevitra ity .. Andao hiaina am-pilaminana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Tsy mankahala an'i Windows aho, tsy mankahala an'i Mac, fa ny GNU / Linux fotsiny no tiako
Lahatsoratra tena tsara, samy mampiasa izay tiany hampiasaina ny tsirairay.
Heveriko fa toy izany koa ... maninona no mandany vola amin'ny fitaovana sy Windows raha afaka manararaotra ireo fitaovako taloha izay tsy afaka mihazakazaka Windows 8 (ny kinova farany amin'izao fotoana izao) fa afaka mihazakazaka ny Debian Squeeze (kinova farany amin'izao fotoana izao) mampiasa Openbox + Conky + Tint2 ary manana birao tsara tarehy sy miasa ary hazavana mahery vaika afaka mihazakazaka amin'ny PC misy RAM 256 MB… ..
Kilombo mahafinaritra no haorinao amin'ity hahaha
Saingy heveriko fa mitovy ihany, efa 25 taona mahery aho no nampiasa pc, nampiasa DOS aho, nandresy 3.1, 3.11, nt, 95, 98, xp, vista, 7, 8 ... linux maromaro distro (redhat, connectiva, ubuntu, debian, mint, manjaro, arch, sabayon, slackware, sns sns), ary nampiasa osx 2 taona (tigra sy leoparda) koa aho.
Samy manana ny lafy tsarany sy ny maharatsy azy ireo izy ireo, fa amin'ny zavatra rehetra dia aleoko foana mijanona amin'ny distro amin'ny fombako manokana, amin'izao fotoana izao Ubuntu 12.10 😉
Ary raha milalao ianao ... Na mpampiasa mandroso amin'ny birao mandeha ho azy, spss, maledictum na matematika ianao ... mifikitra ny rantsan-tànanao
Na dia misy aza ny safidy hafa azo alaina tahaka, ny mitovy amin'ny etona na prehistorika rakotra rindrambaiko, dia mazava ny valiny
Izaho dia manana ilay hevitra hilazana fa misy PlayStation, Wii, Xbox ... sns.
Heveriko fa mbola tsy nilalao 1080p na 720p akory ianao, maro ny lalao mendrika izany, ary ny hafa tsy izany, satria seranan-tsambo avy amin'ny consoles ry zareo.
Eny, ny lalao pc dia tokony ho mankaleo raha manamarina raha ao amin'ny 1080p ...
Na inona na inona "automatisation mandroso birao" anananao dia tsy hanao ny antsasaky ny azonao atao amin'ny LaTeX ianao (maro ny WYSIWYG ho an'io), ka io zavatra minono rantsantanana io dia diso.
Ho fampahalalana anao, ny taratasy siantifika rehetra dia matetika atao ao amin'ny LaTeX noho ny heriny indrindra amin'ny taranja matematika.
Ankehitriny rehefa tsy hitanao, ny tsy fahalalanao na ny tsy fampiasanao azy dia zavatra hafa tanteraka, fa aza tonga manoratra zavatra adaladala toa izany.
Mamaly amin'ny asd
Tsy azoko… Tsy dia lalaoviko loatra, izay kely ataoko dia ataoko amin'ny findainao na amin'ny takelaka ary raha rahampitso te-hilalao betsaka aho dia hividy console.
Birao maimaimpoana ny birao ...
Gustavo Castro (@gustawho) dia hoy izy:
Amin'ny alàlan'ny "alternatives" dia midika izany fa raha tsy manana kinova Linux ireo fampiharana na tsy misy ALVERATIVES maimaimpoana?
Satria, farafaharatsiny momba ny rindrambaiko matematika, miaraka amin'i Maxima + Scilab + Wolfram Mathematica dia ataoko izay rehetra ilaiko ao amin'ny Arch.
Mamaly an'i Gustavo Castro (@gustawho)
Ny olan'ny lalao dia tsy fahadisoan'ny rafitry ny GNU Linux, an'ny mpamorona azy ireo satria tsy te-hanao kinova amin'ireo rafitra ireo izy ireo satria tsy mahita fifanarahana tsara amin'izy ireo, tsy midika izany fa ratsy
izany ny filozofia elav
Somary lany andro ny lahatsoratra
1. Mamonjy loharanon-karena ny Linux, saingy mahakivy ny fitantanana angovo, manakaiky ny varavarankely kde sy gnome, ary miaraka amin'ny powwetop fotsiny ianao dia mahatsapa fa, raha tsy manao zavatra tena lalina dia eo anelanelan'ny 10 sy 30 isan-jato no tsara kokoa… Xfce, misokatra voz, ary ny sasany tsy nanonona azy akory aza, satria na dia am-taratasy aza dia mamonjy loharanon-karena dia mandany tafontrano ny fandaniana angovo
2. Fametrahana fitaovana, amin'ny linux dia somary tsotra izy io na dia indraindray aza amin'ny tranga voafetra dia mety ho fotsy izy io ... Amin'ny windows vista na avo kokoa dia zavatra tsy dia misy dikany amin'ireo mpamily entiny na fanavaozana ny windows, ny olana dia ireo avara-pianarana esory ao amin'ny kinalan'izy ireo clipped ue, na piraty izy ireo ary tsy mampiasa fanavaozana ny windows, nanana mpanonta roa aho ary tsy mbola nanana olana taorian'ny nidirako, ary tsy mila misintona mpamily akory aho raha tsy te-hanana bebe kokoa. safidy ho an'ny totozy, kitendry, scan na mpanonta
3. 7 Ireo viriosy dia nijanona teo aloha tamin'ny fahitana sy ny auc, ary ny olana lehibe dia ny mpampiasa, raha manana azy io ianao ary mametraka patch patch, ny hany zavatra azonao tratrarina dia ny maleware, ary misy ireo amin'ny sehatra rehetra
Mpampiasa ny roa aho, ary samy manana ny loharanom-pahalalana, fa ny iray kosa tsy ambony noho ny iray hafa, satria vokatra manafika niches izy ireo ... Ary isaky ny nosy dia misy toetra miavaka
Miankina amin'ny zavatra maro ny fampisehoana, ao anatin'izany ny karatra horonantsary.
Eo no mahitsy ny tonian-dahatsoratry ny vaovao, ary hoy ianao ... Oh! ratsy izany !! !! fa tsy manontany tena akory ianao hoe maninona.
Indraindray miaraka amina karatra horonantsary malemy, fa miaraka amin'ireo mpamily mendrika (mpamily maimaim-poana amin'ny ankapobeny), dia miasa im-arivo heny noho ny karatra horonantsary mahery izy io nefa miaraka amin'ireo mpamily maharary, toy ny nvidia sy ati.
(Amin'ny ankapobeny dia ato amin'ity faritra ity no andehanan'ny fandaniana angovo)
Mikasika ireo viriosy, TSY MISY, ny viriosy iray dia hahatratra ny GNU / Linux ary hametraka ny tenany, fa raha mitranga eo am-baravarankely izany, ary hitohy izany, satria tianao izany na tsia, ny virus dia orinasa mahasoa M $, koa aza manonofy hifarana izany.
Ny GNU / Linux dia ambony noho ny Windows, tsy dia eo amin'ny lafiny teknika loatra, fa satria ny GNU / Linux dia manana zavatra izay tsy homen'ny windows anao mihitsy. Hery no iantsoana azy.
Miaraka amin'ny rafitra maimaimpoana, afaka mianatra ianao, afaka miara-miasa, manampy, amin'ny lafiny maro, eny fa na dia ny mandika rindrambaiko aza dia tsy hatao hoe mpanao heloka bevava velively ianao;
Azonao atao ny manitsy ny olana raha fantatrao ary raha tsy izany dia azonao atao ny mangataka olona hanao izany ho anao. Azonao atao ny manamboatra ny rindrambaiko hanao izay tianao, izay tsy hataonao amin'ny windows mihitsy.
Mazava ho azy fa amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mankafy ireo fahalalahana ireo ianao, angamba satria tsy liana ianao, fa ireo izay tia mianatra, mitrandraka, manandrana ary manatsara ny GNU / Linux dia tsy voavidim-bola.
Mipetraka amin'ny firenena maharikoriko (Chile) aho, hatramin'ny mbola kely dia nampianarin'izy ireo izahay fa tsy hisy zavatra noforonina teto, fa ny loharanon-karena voajanahary sy blablabla ihany no azontsika omena.
Fa ho an'ny olona toa ahy, izay te-hamorona, mankahala ny fampianarantsika izahay, eny fa na ireo mpandahatra fandaharana aza dia ampianarina ho mpampiasa (fandaharana miaraka amin'ny studio an-tsary fa tsy misy zavatra hafa), raha tsy GNU / Linux, dia tsy ho vitako mihitsy izany. afa-mandositra izany zava-misy mampalahelo izany. Miaraka amin'ny GNU / Linux dia mpampiasa aho, olona fa tsy mpanjifa fotsiny, miaraka amin'ny GNU / Linux dia manana zona bebe kokoa noho ny fampiasana, ny fitsapana ary ny fanjifana fotsiny, mihoatra lavitra noho izany aho.
Minoa na tsia, sarobidy ny fahalalahana, izany no mahatonga ny GNU / Linux ary ho ambony hatrany.
Tiako ilay fehezanteny nofarananao tamin'ny 😀
Eltigretux dia hoy izy:
Avy any Chili koa aho ary marina ny anao, saingy mbola ratsy kokoa noho izany aza, satria ho fantatrao eto fa mikorosy ambony ny kapitalisma, izay tanjon'ny tsirairay ny hahatonga ny tsirairay ho mpanjifa, mifototra amin'iny sipa antsoina hoe «lamaody» iny, izay Tsy inona izany fa ny sarontava mba hamoahana ny mpanjifa, amin'ny fahitalavitra ampahafantariny anao ho Windows ho tsara indrindra amin'ny haitao izy ireo, hampiroborobo ny iPhones ho toy ny manokana izy ireo, sns, raha fintinina, shit fotsiny, soa ihany aorian'izany rehetra izany fa izaho dia archlinuxer Shiliana ary mirehareha. ny amin'izany, ary andao isika hanohy hanana fahalalahana hisafidy fa tsy ho entin'ny maro an'isa, VIVA GNU / LINUX BROTHER!
Mamaly an'i Eltigretux
Manaiky tanteraka ny lohatenin'ity lahatsoratra ity aho. Tsy halako koa ny Window, fa, mazava ho azy, tsy hadinoko ilay boribory kely mihodina isaky ny te-hanomboka programa sy ny lanjany aho, rehefa mihazakazaka na dia ny fampiharana tsotra indrindra aza.
Tsy hohadinoiko mihitsy ny fotoana voalohany nitantanako Gnu / Linux. Mazava ho azy tamin'io andro io, nanomboka "nifoka" tsara kokoa ny solosainako.
Ry Elav malalako.
Raha ny marina dia miombon-kevitra tanteraka aminao aho ary mieritreritra aho fa tsy misy tokony ampiana momba azy. Mampiasa Arch aho ho toy ny rafitra ary mpampiasa GNOME aho ho faty ary ny marina dia tsy misy na ny manontany an'ny iray hafa.
Zavatra iray raha te-hanampy aho dia ny hany zavatra tsy hitako mitovy amin'ny tontolon'ny LINUX / UNIX dia fampiharana, izay noho ny antony miasa no ampiasako ary dia ADOBE DIRECTOR. Ao amin'ny PC misy ahy sy amin'ny Netbook dia manana ny Directeur MX 2004 mandeha amin'ny WINE aho fa mila fiasa sasany izay entin'ny kinova 11.5 izay tsy ananan'ny 2004. Ny zavatra akaiky indrindra dia ny fampiharana novolavolain'ny MIT antsoina hoe SCRATCH.
Raha ny marina dia manoratra an'ity fanehoan-kevitra ity amin'ny solosaina findaiko vao novidiko aho ary raha misy windows 8. Tsy dia ratsy ary raha fiovana somary mahery vaika io, raha azo antsoina izany, mikasika ny nentim-paharazana foto-kevitr'ity rafitra fiasa ity.
Ary ny famaritana kely izay lazainao kely dia tsy hoe ratsy ny rafitra rehetra fa ny fahombiazany amin'ny fampiasana azy dia miankina amin'izay takiana.
Arthur Shelby dia hoy izy:
Nanaiky tanteraka isika fa tsy tokony hanambany OSX sy Windows, rafitra fiasa ara-barotra misy vola be ao ambadik'izy ireo, ny mifanohitra amin'izany dia manana asa be ao ambadiky ny fiarahamonina sy ny orinasa sasany (amin'ny lafiny kely kokoa) i Linux. sembana »Noho ny tsy fisian'ny fanohanan'ny mpanamboatra azy dia mahavita mihoatra ny OS tompona amin'ny asa maro izy.
Valiny tamin'i Arthur Shelby
Tena tsara ilay lahatsoratra, miombon-kevitra amin'ny zava-drehetra aho, mitovy amiko ny nitranga tamin'ny Asus ahy fa niadana be tamin'ny win7 izy ary nafana be mandra-panapa-kevitra ny hanome ny sarto ho an'ny Linux izao ny Asaro miharo miharo miaraka amin'ny xfce dia total fahombiazana tiako
Tiako ny linux
Amena. Na dia eto amin'ny Windows 7 aza aho eto fa tsy mila mijery Internet rehefa tsy eo aho, tsy misy tsara noho ny netbook miaraka amin'i Mint + Xfce (Na Debian ho an'ny andrana sy fianarako amin'ny Linux).
Mikasika ny fanjifana loharanom-pahalalana, ny KDE no manintona indrindra ary ara-dalàna ny fanjifany, saingy tsy afaka hitovy ny Xfce. Kitiho fotsiny ny kernel, X ary Xfce ary RAM 150 megabytes. Tsy mihinana afa-tsy 1GB RAM aho rehefa manana ny zava-drehetra ampiasaiko misokatra sy Firefox miaraka amina tabila maro miaraka amina horonan-taratasy saika tsy misy fetra (The news news Facebook, ohatra, rehefa mamaky lahatsoratra 24 avy amin'ny namanao ianao dia efa manana 1 GB RAM nibodo).
Ny olana amin'ny fandrosoan'ny Linux Desktop dia ny fahafahan'ny mpanamboatra manome mpamily mendrika ho an'ny Linux, indrindra ireo mpanamboatra carte graphique (AMD, Nvidia, Intel Graphics) fa ankehitriny miaraka amin'ny Valve Steam ao anatin'ny Linux, afaka nihatsara ny raharaha. Raha ny momba ny mpamily hafa dia matetika tonga ao amin'ny Wifi ny olana satria miaraka amin'ny ambiny dia mbola tsy nanana olana nifanaraka aho. Miaraka amin'ireo mpamily mahazatra dia niasa tsara ho ahy ny zava-drehetra ary hatramin'ny kernel 3.2, miaraka amin'ny olan'ny wifi dia tsy nanana olana intsony aho. Ny zavatra tokony hankasitrahan'ny olona dia ny filàna kely indrindra hikarohana mpamily hampiasa amin'ny Linux. Ny fampifandraisana ny findaiko Android amin'ny Linux sy ny fampandehanana azy amin'ny mode USB Tethering ary ny fananana ny Linux efa mahatsikaritra azy ho modem dia iray amin'ireo zavatra tiako ity rafi-piasana ity. Ao amin'ny Windows dia tokony ho namoaka ny Samsung Kies sy ny shit 2 hafa aho ary angamba famoizam-po. Mendrika izany, tsy ofisialy ireo mpamily fa ny sary dia tsy omena afa-tsy amin'ny sary satria ny sisa, mandeha tsara kokoa noho ny rehefa nametra fetra ny mpamily ao Windows. Miasa amin'ny atrikasa solosaina aho ary mampiasa Linux fotsiny hahitako raha toa ka tsy mahomby ara-batana ny singa iray sa mpamily ao amin'ny Windows (Matetika io no farany).
Ary momba ny viriosy, misy ny faharefoana amin'ny rafitra rehetra. Ny zavatra iray hafa dia ny fisorohana ny tsy famoahana ny zavatra rehetra mitaky izany raha tsy ilaina izany.
Tahaka ny nolazainao tao amin'ny twitter, izay sombin-kafatra, tiako ilay izy.
David Moron dia hoy izy:
Na dia tsy manome anao ny fahalalahana omen'ny Linux anao aza ny Windows sy ny OSX, tsy manandevo anao izany, ny andevo tsy manana fahaleovan-tena mahaleo tena, ary raha nametraka Linux izy ireo dia tsy fahalalahana izany? Raha ny fiheverana ahy ho eo ambanin'ny sehatry ny lalàna iray hafa, dia tsapako fa ny antsasany ihany no ampiharina, ho an'ireo voalaza etsy ambony, raha izany dia andevon'olona daholo isika ...
Mpampiasa Linux, OSX, ary Windows aho. Tamin'ny asako teo aloha dia nampiasa Linux nandritra ny roa taona isan'andro aho, distros isan-karazany, ao anatin'izany ny Ubuntu sy Debian, mbola mampiasa Fedora ihany aho amin'ny farany, mampiasa OSX aho izao any am-piasana, ary Windows matetika ao an-trano. REHETRA tanteraka rehetra, manana tombony sy maharatsy. Tsy milaza aho fa hazo fitadiavana zava-kendrena fa tena tsy tiako ny iray amin'izy ireo, tiako ny teknolojia, ny fitiavako azy, ny tiako dia midika hoe tsy afaka maneho hevitra araka izay tratra, ary io no heveriko fa mitady anay ny mpampiasa iraisana. manampahaizana manokana amin'izany izahay.
Hevitra marim-pototra ao amin'ilay lahatsoratra, fa tsy izy rehetra. Ny rafitra fiasa tsara indrindra dia ilay mahafeno ny fepetra takian'ny mpampiasa.
Linux dia OS goavana, fa raha ohatra ka manana PC hilalaovana anaram-boninahitra AAA ianao, ary nividy izany ianao, ary tsy mampiasa efitrano birao, na famolavolana, tsy misy, milalao fotsiny, tsara, safidy mahatsiravina izany ! Tsy mahatonga anao ho andevo izany, satria safidy io fa tsy adidy.
Valiny tamin'i David Morón
INDX dia hoy izy:
Valiny amin'i INDX
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho, raha nisy zavatra namboariko, ny rafitra rehetra dia misy bibikely indraindray tena adala ary mahatonga ahy tsy ho tia olona manokana, ny iray izay mifanaraka amiko indrindra no ampiasaiko.
Thejusticiero dia hoy izy:
Izaho dia mpilalao gamer hatramin'ny lalao an'ireo zx Spectrum 😉 nilalao hatramin'ny jetpack ka hatramin'ny kigdom fony aho ary hatramin'ny mpitaingina ny filentehany ka hatrany amin'ny tranon'ny minigrh ary lalao maro isaky ny taranaka, satria kilalao kilasy taloha aho dia aleoko foana ny consoles mifanohitra amin'ny solosaina iray, aorian'ny konsole rehetra dia tsy inona fa ny solosaina misy sehatra hilalaovana, Microsoft dia niditra an-tsehatra tamin'ny tontolon'ny lalao video ary satria tsy ampihimamba ny tontolon'ny solosaina an-trano, fa avy eo milaza fa ao amin'ny Linux dia tsy misy lalao fa baribariana izany, amin'ny linux dia azoko alaina tahaka ireo konsol teo aloha 😀 MY DEAR AMIGACD32, SEGA MEGADRIVE GAME CUBE, PS1 ARY PS2, koa amin'izao fotoana izao dia manana lalao teratany izay lalao tsotra fotsiny, ny mpamosavy, ny fiainana malaky, vavahady, andry mandrakizay, ary indiana maro an'isa, raha marina fa mbola tsy mahazo ny fanohanan'ny maro AAA toy ny ananan'i Windows fa hiova be ny fahatongavan'i SteamOS, na izany aza nandroso be ny divay , ohatra afaka ahomilalaova kilalao maizina: WoW, starcraft, Diablo tena milamina ary na dia ny lalao MMORPG toy ny paroasy guild, lalan'ny sesitany, Wakfu (tera-tany), raha mbola tena gamer ianao dia tsy hisolo tena olana ny linux, lalao maro koa no ho anao ny konsolanao ary na dia tsy hihazakazaka amin'ny 1080 miaraka amin'ny 60 fps aza izy ireo, ny mpilalao dia manome lanja ny traikefa noho ny fahamendrehan'ny lalao iray, ary koa amin'ny windows dia sarotra be ny milalao amin'ity kalitao ity raha tsy misy frame ambany, raha ny marina dia mila 1700 Euros farafahakeliny ianao amin'ny zavatra toy izao, mba hahafahanao mankafy azy io amin'ny lalao amin'ny alàlan'ny lalantsara na fps feno sary fa miaraka amina lalao tsy dia mahazatra, 😀 na izany aza, miaraka amin'ny zava-drehetra ary ny divay dia mandeha 120 ny LoL ary midina hatramin'ny 60 fps, eo am-baravarankely mitovy ihany Ny solo-sainiko mankany 60 ka latsaka hatramin'ny 30 OO Ny herin'ny varavarankely dia azo antoka fa liana tokoa, nefa avy eo dia misy ny fanboys mahazatra fanboy windowsceros voalavo ankizy izay milalao COD na BTF ihany no miteny tsy misy dikany toa ny "hazakazaka master PC "
Valiny tamin'i Eljusticiero
kondur05 dia hoy izy:
Tsara hoy i elav
Valiny amin'ny kondur05
Fernando A. dia hoy izy:
Eny mazava ho azy elav .. eny mazava ho azy .. iray andro lasa izay dia nanaratsy lehilahy iray sendra mac ianao.
Valiny tamin'i Fernando A.
Eny, tsy azonao ilay lahatsoratra na tsy nanahirana anao hahatakatra azy akory ianao. Tsy nitsikera an'i Icaza mihitsy aho tamin'ny fampiasana Mac ..
Tena tsy tiako izany ao amin'ny fampianarana foana rehefa mampianatra mampiditra PPA aho, manaova rakitra azo tanterahina, mametaka fonosana na asa hafa mora tanterahina amin'ny alàlan'ny UI napetraka ny baiko. Manaja aho fa misy ny olona te hampiasa bebe kokoa ny terminal, fa ny fomba fanaovana sary no tokony hampianarina, ary izay te hampiasa ilay terminal dia efa hampiasa azy. Saingy naharitra roa taona mahery aho vao nanampy ny PPA hahitako izay azo atao, satria tsy milaza izany na aiza na aiza izy ireo.
Mila milaza aho fa ny tenako indraindray mampiasa ny terminal arakaraka ny zavatra inona, amin'ny toe-javatra sasany dia mahazo aina kokoa ho ahy izy io, saingy tsy tokony hampiroboroboana ho an'ny "daholobe" amin'ny ankapobeny izy io satria zavatra tsy miditra amin'ny maso izany. andao hanambaka.
Tena lahatsoratra tsara izany, marina fa tsy mila mankahala ny fikandrana sy mac ianao, fa ny taona tsara indrindra teo amin'ny fiainako tamin'ny naha-mpampiasa windows ahy dia tao amin'ny windows 2000 ary ny nahagaga indrindra dia ny windows xp, tao amin'ny solo-saina voalohany nataoko. windows xp fanontana an-trano, nandeha ny taona voalohany nefa very maina ary tsy te hahalala misimisy kokoa, mandra-pahatsiarovako fa nisy dadatoako nametraka boot windows 98 sy Fedora core (tamin'izany fotoana izany) ary hoy aho hoe: Hahafantatra bebe kokoa momba an'io olana linux io aho, tao an-tsekoliko dia nanandrana nampianatra linux iray ihany koa izy ireo (soa ihany) ary afaka nilaza ianao fa ny distro voalohany nataoko dia ny Fedora core 7, tiako ity distro ity ary tsy tiako hialana amin'izany, saingy nijery safidy hafa aho ary tao an-tsekoliko dia nampiasa debian sy mena satroka linux (ho an'izany fotoana izany dia hiverina aho ary averiko XD) ny fitiavako farany farany dia ny Fedora 14, rehefa avy teo aho dia tsy nanomboka miaraka tsara amin'i Fedora ary noho izay antony izay dia eto amin'ny Linux Scientific aho izay antenaiko fa tsy hiova
Diso fanantenana aho, tsy ity no post ho an'ny troll nampanantenainareo an'i elav: /
HAHAJJA ivelan'izany, lahatsoratra tsara
DACCorp dia hoy izy:
Marina ny anao, inona no lohahevitra trite, tadidiko ny namakiako lohahevitra iray mitovy amin'izany, saika mitovy amin'ireo teboka mitovy amin'ny magazine @rroba tokony ho 10 taona lasa izay.
Valiny amin'ny DACCorp
Lahatsoratra tena tsara izany, saingy tsy haiko raha manandrana mandresy lahatra ny tenanao ianao fa tianao ny GNU / Linux. Izaho manokana dia miombon-kevitra tanteraka amin'ny zava-drehetra amin'ny lahatsoratra, saingy tsy misy ny fampitahana eo amin'ny Windows, Mac OS sy GNU / Linux, satria samy hafa tanteraka izy ireo.
Aza matoky ahy. Tena resy lahatra aho, raha ny marina, resy lahatra aho nandritra ny 7 taona. Mino aho fa mety misy teboka fampitahana eo amin'ny 3, toy ny ampitahanao ny motherboard 3 avy amin'ny mpanamboatra samihafa na telefaona finday telo .. Ny zavatra ataoko Fantatrao fa azonao ampitahaina dia ny filozofia ao ambadik'izy ireo tsirairay.
Hmmm, ok, satria maro no mamadika an'ity lohahevitra ity ho zavatra ara-pinoana kokoa ary koa mahatsapa ho anisan'ny zavatra iray, izay mazava ho azy fa tsy anao.
Windows 7 (tandremo, 7!) Manana mpamily marobe ary mifanaraka amin'ny fitaovana marobe, saingy nanana tranga izay tsy mifanaraka amin'ny zavatra sasany ao amin'ny masiniko birao aho. Etsy ankilany, i Arch dia mahafantatra ny zava-drehetra.
Tamin'ny voalohany dia nanomboka nampiasa ny GNU / Linux aho ka niresaka momba ny fitoniana, ny fahombiazana ary ny hafainganana amin'ny fanatanterahana izy ireo, ary hatramin'izao dia afaka milaza aho fa tsy diso izy ireo.
Hoy i elav: 'Fako i Windows? OS X tsy mandeha? Ny Operating Systems dia sady "ratsy" no "devoly", fa tsy manova azy roa ho an'ny GNU / Linux aho. Ary eny, tompokolahy, mandreraka ity lohahevitra ity ».
Fa ny tena marina dia samy liana amin'ny zavatra betsaka indrindra isika rehetra, tena tiako ilay fiarahabana lohateny
Manaiky aho, mandreraka. Nefa tsy maintsy ekena fa lahatsoratra tsara io.
Tsy mankahala an'i Windows aho, na Mac, na Linux ...
Ilay halako dia ny fofombadin'ny sakaizako akaiky indrindra izay raisiko amin'ny zanako vavy. Eo io lo! ¬_¬
xDD tsy namanao io ..
Tena misy dikany sy marina tokoa ny teninao ary ohatrinona ny fahamarinana ao anatiny. Tokony hamaky ity lahatsoratra ity ny tsirairay. Oh, ary misy fizarana GNU / Linux tsy tambo isaina ho an'izay te hampiasa azy ireo.
Misaotra betsaka .. nijanona teo ary nanome hevitra .. 😉
Rehefa avelako ireo mpiara-mianatra amiko manana traikefa amin'ny solosaina dia misy resaka miverimberina toy izao:
-Inona no tsara kokoa Windows, Mac na Linux?
Izay no valiako, - Tsy misy fampitahana eo amin'ny 3, mila manontany ianao hoe inona no tsara kokoa amin'ny roa voalohany, satria zavatra mitovy ireo.
Eto izy ireo dia manao ahy ho toy ny hoe 'Nanontany ny olona marina ve aho? Tsy fantany akory hoe daholo daholo ». ary manontany izy ireo.
OK, noho izany tsara kokoa ve ny Windows na Mac?
ary valiako izy ireo. - Windows iray heny tsara heny!
Ny endrika fampihorohoroana napetrak'izy ireo dia tiako io!
Efa nohazavaiko fa ny mamaritra ny atao hoe "zavatra" dia ny tanjony, ny tanjony, ka mitovy i Win sy Mac satria ny tanjon'izy roa dia ny hahatonga ny olona iray ho lasa multimillionaire, ary ny famaritana ny fahombiazany dia: hiteraka ny lehibe indrindra Mahazo amin'ny ezaka faran'izay kely, eto Windows maka ny mofomamy. Mac dia poles kokoa ny rafitrao ary manisy ezaka bebe kokoa amin'ny fitaovanao, raha ampy kosa ny dokam-barotra Windows sy ny fahafaham-po avy amin'ireo mpamokatra fitaovana.
Mac sy Windows dia vokatra, GNU / Linux tsy.
Manoro hevitra anao aho hampiasa izay ilainao, amin'ny fiheverana fa misy rindrambaiko manokana ary indraindray tsy mifanaraka amin'ny rafitra tsirairay, fa raha manapa-kevitra amin'ny Win na Mac OS X ianao dia aza ampifandraisina amin'ny Internet, satria na eo aza ny Vokatra Apple Tsy afaka viriosy sy fitsikilovana * avy amin'ny antoko fahatelo izy ireo, ka tsy misy na dia iray aza ho voavonjy amin'ny fitsikilovana sy ny fanitsakitsahana ny zonao amin'ireo orinasa ireo
Efa nohazavaiko fa ny mamaritra ny atao hoe "zavatra" dia ny tanjony, ny tanjony, ka mitovy i Win sy Mac satria ny tanjon'izy roa dia ny hahatonga ny olona iray ho lasa multimillionaire, ary ny famaritana ny fahombiazany dia: hiteraka ny lehibe indrindra Mahazo amin'ny ezaka faran'izay kely, eto Windows maka ny mofomamy. Mac dia poles kokoa ny rafitrao ary manisy ezaka bebe kokoa amin'ny fitaovanao, raha ampy ny dokambarotra Windows sy ny fahafaham-po avy amin'ireo mpamokatra fitaovana.
Mac sy Windows dia vokatra, ny GNU / Linux tsy. »
Raha mahazo alalana aminao dia ho raisiko io fanehoan-kevitra io rehefa manontany ahy ianao dia tiako izany.
Post elav tena tsara, Gnu-linux dia rafitra fiasa mendri-kaja izay manome antsika ny fitaovana ilaina rehetra hampiasana ny solosainantsika araka izay itiavantsika azy. Herintaona no nampiasako azy ho hany rafitra miasa ary mianatra amin'ny ambaratonga oniversite aho ary tsy mbola nanana olana tamin'ny libreoffice.
Misaotra anao tamin'ny lahatsoratra tsara toy izany, raha avelanao aho ary miaraka amin'ny alalanao dia apetrako eo amin'ny pejiko manome anao laza feno izany.
"Matetika ireo mpampiasa vaovao dia tsy mijanona mieritreritra fa rehefa" misy zavatra tsy mandeha "toa ny Windows na Mac, dia tsy satria ratsy ny" Linux ", fa satria ny mpanamboatra fitaovana dia liana hanaraka ny làlan'ny vola nozahana matetika avy amin'i Microsoft sy Apple.
Mora dia mora ny milaza hoe: Tsy mandeha amin'ny Linux io, shit .. na mandeha, fa tsy araka ny tokony ho izy .. Fa misy manontany tena hoe nahoana? »
Raha amidy ianao fa ny Linux dia safidy iray hafa amin'ny Windows sy / na Mac ary ny OSX dia tsy mila mieritreritra ny antony mahatonga ny tsy fetezana na tsy fitoviana amin'ny kalitaon'ny asa ny mpampiasa, raha toa ka tsy tiana izany. , tsy ilaina, vanim-potoana.
Tsy ekeko fa tokony hanontany momba ny olana ara-teknika ny mpampiasa ary hahita ny fanamarinana amin'izay atolony.
Satria apetrako eo amin'ny lafin'ny serivera ity ary averiko ny voalazanao: mora be amin'ny orinasa ny milaza fa ny serivera Windows 2008 dia kesika fromazy Gruyère, saingy tsy manontany tena izy ireo hoe maninona.
Tsy mety ho marina kokoa izany. +1.
lawliet @ debian dia hoy izy:
Heveriko fa misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny kolontsaina izany, amin'ny politika izany. Raha mbola tsy mieritreritra ianao, manadihady politika, dia apetrak'ireo mpitondra anao malalaka izay tadiaviny aminao.
Mora kokoa ny fiainana raha tsy misy safidy hisafidianana.
Heveriko fa ity fehezanteny ity dia mamintina an'io, ary heveriko fa tsy miandany ny fomba fijeriko, na dia mazava ho azy ho ahy GNU / Linux no rafitra tsara indrindra amin'ny rehetra.
Valiny ho an'ny lawliet @ debian
Mivarotra anao ve izy ireo?
Shengdi dia hoy izy:
Ao amin'ny SENA (andao lazaina hoe ny oniversite ianarako) mianatra Animation aho ary mampiasa Mac ...
Ny marina dia tsy misy mahagaga. Tsy azoko atao ny mamaha ny rakitra .rar maloto, ankoatr'izay, hahitako ireo lahatahiry miafina izay tsy maintsy alehako any amin'ny terminal (eny, zavatra tsy noeritreretiko ho nataoko tamin'ny Mac mihitsy).
Tsy nalamina ny sary eraky ny toerana satria tsy manitsy azy ireo varavarankely tsy dia mandeha, hafahafa, antontan-taratasy nalamina araka ny anarany, ao anatin'izany ny lahatahiry, ary ny antsipiriany kely hafa izay mahatonga azy io tsy mandeha loatra.
Ny marina dia, aleoko aza W7 noho Mac.
Valiny tamin'i Shengdi
ny tiana ambara dia hoe na firy na firy no tianao hatsaraina ny linux, gimp, ohatra, miadana ny fiovany fa tsy hoe satria manontany ny mpamorona ianao fa marina, tsy mandoa na inona na inona izy ireo fa tsy hoe satria nanome 1000 dolara dia hihatsara izy ireo satria tiako fotsiny raha tsy tolo-kevitra goavambe izy ireo, ratsy tarehy ny gimp raha ny sary no ampitahaina amin'ny krita
Na satria ny birao maimaim-poana dia mitazona ireo sary masina mitovy ihany satria nisy ny openoffice na koa tao amin'ny birao maimaim-poana 4 dia nanelingelina ny fanovana azy ireo izy ireo ary raha jerena ny mpampiasa vaovao iray izay avy amin'ny iwork na ny biraon'ny MS dia manao ny birao malalaka ho toy ny Office 2003 na ambany.
Tsara ny fahafinaretantsika amin'ny tontolon'ny informatika samihafa, ary afaka misafidy izay OS hapetraka amin'ny masininay isika, ankoatry ny fametrahana azy io ho an'ny làlan'ny mpampiasa tadiavinay, ary ny tsara kokoa aza dia afaka manimba ny fianaranay izahay. Te hanana Ianao tsy maintsy mampiasa ny paosinao hanombohana na inona na inona, eto amin'ny GNU / Linux, averiko indray, mianatra ianao, raha misy zavatra tsy mety, azo atao ny mametaka tsy misy fatiantoka antontan-taratasy amin'ny llinux. arahabaina
Elav ... lahatsoratra nahafinaritra nosoratanao, nampitsiky ahy teo imasoko ianao toy ny xD adala, marina ny anao, ary miombon-kevitra tanteraka amin'ilay terminal, zavatra maro (tsy hiteniteny foana ny zava-drehetra). mora kokoa raha manoratra azy ^^
lahatsoratra fanontana tena tsara. nampahatsiaro tena ho be hambom-po ianao hampiasa Linux xD.
Eny ... amin'ny maha-mpianakavy azy, manolotra fanampiana lehibe i Linux, indrindra eo amin'ny lafiny toekarena, ny tsy fananana solosaina roa na telo miaraka amina rindrambaiko tany am-boalohany, ka inona no tadiavin'ny ankamaroan'izy ireo ... hitrandrahana! Ary raha milaza amin'ny zanako aho, mora kokoa ny mianatra Linux noho ny mitady programa piraty izay hanimba ny masinanao amin'ny virus na, satria piraty izany dia tsy azonao atao ny manavao azy io na mankafy ny fitaovany rehetra.
Tsara kokoa noho izany ihany koa ny mahita hafatra: ny rafitrao dia havaozina! a! Tsy marina ny laharana serial!
marlonrb dia hoy izy:
marina, marina, marina ... ny mazava sy ny hery homba anao; D
Mamaly an'i marlonrb
Lehilahy lahatsoratra tsara, mazava, fohy ary misy masontsivana.
Ity no iray amin'ireo antony hanarahako ny DL, satria ny olona ao ambadiky ny tetikasa dia manana atidoha - ary ampiasain'izy ireo !!!
satria ny olona ao ambadiky ny tetikasa dia manana atidoha - ary ampiasain'izy ireo !!!
…. HAHAHAHAHAHAHAHA, misaotra! TPT!!
"... ireo izay tsy manao izany, dia hanohy hieritreritra fa adala aho ary volo mihohoka amin'ny lohalika, taliban, mpankafy fatratra ny famonoan-tena, tsy mifanaraka amin'ny hetahetan'ny mpijirika ... ary minoa ahy, lavitra izany zava-misy. "
Ok, azoko antoka daholo ianareo fa ity famaritana ity dia tsy mifanaraka amin'ny namako elav, indrindra mikasika ny volo tonga amin'ny lohalika ... HAHAHA
Tsara, matotra, lahatsoratra tena tsara, miombon-kevitra amin'ny hevitrao aho, fa raha nisy fotoana noterena hampiasa OS hafa ankoatry ny GNU / Linux, ny zavatra farany nofidiako dia OS x, satria mamepetra loatra; isaky ny latsaka eo am-pelatanako ny iShit dia maniry ny hanipy azy amin'ny tany aho satria mamela anao hanao izay heverin'ny "guru" ao amin'ny Apple fa ilainao ary TSY MANAIKY ny fikasako.
Raha fintinina dia iray amin'ireo mino aho fa tsy misy zavatra hafa toa ny fahalalahana, amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana.
Saingy tsy ampy ny mankafy ny safidy feno atolotry ny linux, fa koa hiditra amin'ny tetikasa miara-miasa amin'ny fomba samy hafa, mamolavola na manaparitaka azy, hany ka maro ny mpampiasa mampiasa azy ary mampitombo ny isan-jato toy ny any Mexico. , ohatra, na dia ny mpampiasa 1% aza tsy mahalala ny mety rehetra atolotry ny Linux, satria ny ankamaroany dia maniry ny voaroba sy ny vavany ny zava-drehetra.
Azo antoka fa amin'ny fahalalahana dia ny herin'ny GNU / Linux. Tsy nampiasa Mac aho fa tamin'ny bibikely Windows OS, viriosy sy lisansa rindrambaiko no nanokatra varavarana ho an'ny Linux ho ahy.
Tena sombin-kafatra tena tsara.
Andao izao hivoaka ny tranontsika ary hampiroborobo ny GNU / Linux na Linux eny an-dalambe.
Liher dia hoy izy:
Mizara ny hevitrao aho, telo taona lasa izay dia hitako ny Linux ary io no sehatra iasako amin'izao fotoana izao, raha mila windows na mac na android aho mampiasa virtualbox, ary koa tsy manova azy ho vazivazy aho.
Tohizo, ity bilaogy ity no iray amin'ny tiako indrindra, misaotra ireo lahatsoratrao, nahafinaritra ry zareo.
Valiny tamin'i Liher
zangarreon dia hoy izy:
Miombon-kevitra tanteraka amin'ilay lahatsoratra aho, mahatsapa ho fantatra tanteraka aho ary mampiasa kde ao anatin'ny PIV sivy taona, ka hoy ry zareo fa tontolo mavesatra izany.
Mamaly an'i zangarreon
Whowne dia hoy izy:
Tsara ny lahatsoratra elav, aza mila miady amin'ny fitenenana hoe "Tsy hianjera ny Windows" na mahavariana ny iMac, hoentina ho an'ny c * Windows sy Linux izy ireo "
Valiny amin'i Whowne
Salama namana. Te-hametraka an'ity fanontaniana ity aho raha misy afaka manamboatra ny olako. Izaho koa dia mampiasa Linux, Guadalinex 10 2.0. Rehefa misintona ny programa Smart Board Note Book aho dia tsy mitondra fitaovana fandrefesana (mpanapaka, kompas ...) izay tena ilaiko amin'ilay lohahevitra omeko. Etsy ankilany, mitondra azy ireo i Windows. Misy olona afaka miteny ahy ve hoe ahoana ny fomba hametrahana na fampidinana azy ireo? Misaotra betsaka ary arahaba.
Aufer dia hoy izy:
Tena tiako ny mampiasa Linux, mihevitra ny tenako ho mpampiasa antonony aho, efa nanandrana OS, Windows, Mac OS, Linux ary hatreto dia tsy mangataka na iza na iza ny Linux.
Valiny amin'i Aufer
Momba ny fomba mifanohitra amin'izany no ataoko: ho variana amin'ny lafin-javatra faran'izay kely indrindra amin'ny rafitra aho, hamaky isan'andro ny lisitra fandefasana kernel, xorg, mesa, sns. ary mazava ho azy ireo distro izay nampiasako hatramin'ny vao androany dia tsy tiako ny fizarana izay miasa voalohany indrindra indrindra.
Izao vao manomboka azoko ny mpampiasa farany rehefa manao fihetsiketsehana izy ireo indraindray miasa ny mihantona ary indraindray tsy mandeha, rehefa mampifandray peripheraly izy ireo ary tsy ekena ary rehefa sarotra ny zava-drehetra rehefa tokony ho tsotra ho an'ny 2013 - ohatra, ny fanavaozana ny rindranasa rehefa navotsotra izy ireo fa tsy hiandry 6 volana farafahakeliny amin'ny disos sasany alohan'ny hamelana azy hanavao.
Azoko tsara ny mpampiasa Windows sy Mac rehefa miatrika 'linux' izy ireo ary mivaro-tena eraky ny toerana.
Enrique Ayala dia hoy izy:
Valiny tamin'i Enrique Ayala
Raha ny voalazan'ilay lahatsoratra dia zavatra iray monja, fantatro fa lafo sy tsy mahomby ny windows ... fa raha maka teboka iray nolazainao ianao, raha mila toerana betsaka kokoa izy io dia noho izy manana mifanentana bebe kokoa, izany hoe raha ny fitaovanao dia generic ianao mety manana ny mpamily rehetra ilainao amin'ny linux, fa io habaka fanampiny io dia midika koa fa ny windows dia afaka manohana karazana peripheraly maro karazana. Tsy misy maimaimpoana eto amin'ity fiainana ity. Mandainga aho Linux sy Android eny ajaj, fa ny zavatra rehetra kosa misy vidiny.
RENY MASIN'ANDRIAMANITRA !!! Ianao no nanao ny fanazavana tsara indrindra momba ny antony Linux fa tsy Windows / Mac, na dia manan-kery ihany koa ny BSD (na dia tato ho ato aza, dia mahavariana ny OpenBSD raha ny amin'ny fametrahana ho an'ireo mpitia ny filozofia KISS sy ny fampiasana azy tsotra izao).
Miombon-kevitra amin'ny mpanoratra aho, Windows Tsy mbola nino mihitsy aho fa ratsy io, na ny Windows 8 aza, na dia teo aza ny fanakianana azy dia tsara lavitra noho ilay teo alohany (momba ny fampisehoana)
Na izany aza, tsy mampitaha na aiza na aiza akaikin'ny linux, raha ny hafainganam-pandeha, ny fahombiazany, ny fitantanana RAM tsaratsara kokoa, ny startup ary ny shutdown, vondrom-piarahamonina marobe izay misy manampy, ny fampandrosoana haingana dia haingana, maro ny GI misy, mifanentana, mampifanaraka, milamina fahasamihafana, fahalalahana, programa maimaimpoana maimaimpoana ary koa maimaim-poana, sns.
Na izany na tsy izany dia samy tsara avokoa, saingy ny Linux dia tsara lavitra kokoa, ny varavarankely fotsiny no alehako rehefa mandeha amin'ny distro ampiasako dia tsy manomboka ahy
Salama, eo anilan'io ny teboka, saingy manana fahombiazana tsara kokoa noho ny 7 ny Windows 8, raha tsy hoe hampiasa ilay interface vaovao fotsiny ianao, izay inoako fa hataon'ny olona iray
Ny zavatra nosoratako tamin'izany dia izay heveriko ihany, mbola mieritreritra aho fa ny 8 dia tsara kokoa noho ny 7 amin'ny fampisehoana.
Azo antoka fa afaka mieritreritra izay tadiavinao ianao, saingy samy nanandrana aho ary ny 7 dia tsara kokoa, angamba tsy dia be loatra, fa andao lazaina fa raha tsy mampiasa ilay interface w8 vaovao ianao dia tsy misy dikany ny fametrahana azy fa resaka famonoana aero sy fametrahana ny loha-hevitra ho an'ny windows na ny lohahevitra klasika ary tsy laniny firy ny w7
Toy izany koa no mihatra amin'ny zavatra niainako, samy nanandrana aho ary tsara kokoa ny 8.1.
Tsy misy fomba hafa mety hampihena kely kokoa ny fananana serivisy bebe kokoa ary ny interface roa. Manana ny faratampony amin'ny netbook aho ary mandany ahy toy ny 360 mb ram 1gb, ny windows 8 pro nandany ahy 500 mb ary nanokatra ny fampiharana miadana kokoa izy, maro ny fahasamihafana.
Amin'ny windows dia mandany 1 GB foana aho na 7 na 8, na dia miresaka netbook taloha toy izany aza aho dia heveriko fa ny 8 dia tsy namboarina tamin'io fitaovana io ao an-tsaina, ary ho an'ireo pcs vao haingana kokoa raha tsapanao ny mahasamihafa azy (tsara) rehefa mampiasa windows 8.1.
Netbook vaovao io, tsara kokoa ny 7, raha tsy tianao ilay interface vaovao, raha tsy izany dia manoro hevitra ny 7 aho
RAM 1GB, ka tsy vaovao io. Ho an'ny iray toy izany, ny 7 dia miasa tsara satria azonao atao ny manala ny effets aero mora foana ary mamonjy ram.
Etsy ankilany, mbola aleoko ihany ny 8, miresaka ny zava-bita atolotray azy isika, ny fanatsarana izay entin'ny kinova NT vaovao izay mampiasa Windows 8, ohatra, ny famindrana rakitra miaraka amin'ity kinova vaovao ity dia haingana kokoa noho ny amin'ny 7 Efa misy Raha tsy tian'ny olona ilay interface dia afaka mampiasa 7 mandritra ny taona maro izy ireo.
Izy io dia netbook, mazava ho azy fa hanana ondrilahy 1gb.
shinta87 dia hoy izy:
Efa manana ny xbox 360-ko aho hialana amin'ny filalaovana ny console sy lavitra ny windows fa ny olana dia ny faneken'ny telefaonako azy amin'ny ubuntu ary koa ny wifi pc dia tsy mahatafiditra rtl8190 raha mandeha io dia mamafa voafafa maharitra aho fa ho an'io pitsopitsony io aho mila mampiasa azy
Mamaly an'i shinta87
manara-maso dia hoy izy:
Heveriko fa mitovy ihany, tadiavo ity aorian'ny usr windows 7 (izay tsy mampifandray ahy amin'ny Internet milaza hoe: fifandraisana voafetra), noho ny fahalianana dia nanandrana ny osememary aho, ary mifandray amin'ny 1 aho, misaotra an'i linux 🙂
Valiny tamin'i Monitopro
Omeko an'i Linux mandritra ny 4 taona eo ho eo ny fiainana alohan'ny lanin'ny paikady fandraharahana ambony an'ny Windows / MacO sy ny fanavaozana azy ireo indrindra ny farany.
Raha mitranga izany dia hankafiziko ny Debian / Arch / Gentoo -ko.
rommel dia hoy izy:
Nosokajiko ho toy izao:
Mpampiasa Windows aho (indrisy xD)
Napetrako toy izao satria tsotra
mac toy ny linux dia tsy mora voan'ny virus ary koa samy milamina tsara ary tena tsara Linux apetrako eo amin'ny faharoa satria OS sarotra be ho an'ny trano
ary ny windows dia tsara fa miaraka amin'izay koa
Valio i rommel
Ignatian dia hoy izy:
Tena tiako ny linux (unix) noho ny terminal sy ny fahafahako manova ny zava-drehetra.
Mamaly an'i ignaciano
KDE Telepathy 0.6 Beta misy
Fomba fanodikodinana na fanafenana kaody amin'ny script bash